FAV Polio : Nangingina ny fanombohana ny vakisiny | NewsMada
FAV Polio : Nangingina ny fanombohana ny vakisiny
Nanomboka omaly ary haharitra hateloana ny fanaovam-baksiny faobe iadiana amin’ny aretina lefakozatra manerana ny Nosy.
Andiany faha-11 izao tanterahina izao izay tokony ho efa natao ny volana oktobra lasa teo saingy noho ny fahasahiranana tamin’ny fiadiana amin’ny pesta, nahemotra ny fanaovam-baksiny. Tokony haverina isaky ny enim-bolana ny vaksiny miaro amin’ny aretina lefakozatra hampahomby ny famongorana izany aretina izay ka hahazoan’i Madagasikara ny taratasy fanamarinana fa foana tanteraka ny lefakozatra. Ny taona 2016 no nahitana tranga farany tamin’ny aretina lefakozatra teto amintsika. Natokana ho an’ny zaza latsaky ny 5 taona ny vaksiny atete ao am-bava iarovana azy ireny. Mahatratra 5 tapitrisa latsaka kely ny isan’ny zaza latsaky ny 5 taona iantefan’ny fanaovam-baksiny andiany faha-11 miaro amin’ny aretina lefakozatra.
Ny zavatra tsapa, nangingina ny fanombohana ny hetsika ary tsy nialohavan’ny famangiana isan-tokantrano nanontany ny isan’ny zaza latsaky ny 5 taona ao aminy ataon’ny mpanentana eny ifotony toy ny mahazatra. Hotanterahina any amin’ny distrikan’i Maevatanana (RN4) ny fanamarihana ny fanaovam-baksiny faobe iadiana amin’ny lefakozatra sy ny Herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, anio.
Misy tolotra ara-pahasalamana maromaro ho an’ny reny mitondra vohoka sy ny zaza latsaky ny 5 taona mandritra ny Herinandron’ny fahasalamana, manomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao. Ankoatra ny fanatanterahana ny vaksiny mahazatra atao mialoha ny faherintaon’ny zaza, eo ny fizarana vitamine A, odikankana sy fitiliana ny zaza voan’ny tsy fanjarian-tsakafo. Homena odikankana koa ny vehivavy mitondra vohoka efa-bolana ary atao vaksiny miaro amin’ny aretina tetanosy. Manohana ny hetsika ny Unicef, OMS, USAID amin’ny alalan’ny PSI Madagascar.